စစ်ကိုင်းတွင် အရပ်ရပ် အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ အခြားနည်းဖြင့် လေလံတင် ရောင်းချသော်လည်း ကြမ် - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်းတွင် အရပ်ရပ် အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ အခြားနည်းဖြင့် လေလံတင် ရောင်းချသော်လည်း ကြမ်
စစ်ကိုင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၈
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (အောက်တိုဘာမှ စက်တင်ဘာအထိ) စစ်ကိုင်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင်များ အခြား နည်းဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချပွဲကို စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က စစ်ကိုင်းမြို့ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာရောင်းချသည့် အမျိုးအစား ၂ဝ မှ ၁၈ မျိုးမှာ ကြမ်းခင်းဈေးပင် ပြည်မီအောင် မပေးနိုင်သဖြင့် လေလံရောင်းချနိုင်ခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ဘဲ ယာယီအသိအမှတ်ပြုမှုသာ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လေလံတင်ရောင်းချရာတွင် မြို့မဈေးကြီး၊ ရွာထောင်၊ သောတာပန်၊ ရွှေမင်းဝံ၊ ရွာသစ်ကြီး၊ အုန်းတော၊ ဆားတောင်၊ တင်းတိပ်၊ ညောင်ပင်ဝန်းအမဲလုပ်ငန်းများအတွက် ၁၁ နေရာ၊ မြို့မ၊ သောတာပန်၊ ရွှေမင်းဝံ၊ ရွာထောင်၊ အုန်းတော၊ ညောင်ပင်ဝန်း၊ သိုး/ဆိတ လုပ်ငန်းများအတွက် ခုနစ်နေရာ၊ မီးသွေးတိုက်ဖြတ်၊ ကူးတို့လုပ်ငန်း တစ်နေရာနှင့် မြို့မဈေးကြီး စက်ဘီးကောက်လုပ်ငန်းအတွက် တစ်နေရာတို့အား အခြားနည်းဖြင့် လေ လံတင်ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒီနေ့ လေလံတင်ရောင်းချတဲ့ အမျိုး ၂ဝ က အရင်အကြိမ်များက ရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကြမ်းခင်းလေလံဈေးတောင် မပေးကြတော့လို့ အခုတတိယအကြိမ် ရောင်းချတာပါ။ အခုဟာက ဒီနှစ်ကြမ်းခင်းဈေးလည်း မမီဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ပျမ်းမျှလေလံတင် ရောင်းချရငွေလည်း မမီဘူး။ လေလံမအောင်ဘူးလို့ ပြောရပါမယ်” ဟု စစ်ကိုင်းမြို့နယ်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
တတိယအကြိမ် အခြားနည်းလမ်းဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချရာတွင် ကြမ်းခင်းဈေးပင် ပြည့်မီအောင် မပေးသဖြင့် လေလံပွဲမှတ်တမ်းများကို ယာယီအသိအမှတ်ပြုထားပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ တင် ပြကာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်ကိုရယူ၍ အဆိုပါ လုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ကိစ္စအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
စစ်ကိုင်းမြို့နယ်မှ အမဲနှင့် သိုး၊ ဆိတ်လိုင်စင်စီများမှာ ယခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက်တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်ရာ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မန္တလေးတွင် မြို့တော် စည်ပင်သာယာ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ပါက စည်ပင် အထူးတရားရုံး၌ တရားစွဲဆိုသွားမ??
Padma Lakshmi ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မှာ လိင်အကြမ်းဖက်မှု ခံခဲ့ရကြောင်း ဝန်ခံ၊ အမျိုးသမီးများကို နှုတ်ဆိတ်
ဝက်စ်ဘရွန်းနှင့် ပွဲမှ အပြုအမူကြောင့် အာဆင်နယ်နည်းပြ ဝင်းဂါး သုံးပွဲပယ် ခံရ
ဂွါဒီယိုလာကိုအနိုင်မရဖူးသည့် စံချိန်ကို ရပ်တန့်ရန် အမ်မရီကြိုးစားမည် ၊ အာဆင်နယ်နှင့်ပွဲတ
ရှစ်လေးလုံး နှစ်သုံးဆယ် ပြည့်သည့်တိုင် တိုင်းရင်းသားများ မျှော်မှန်းခဲ့သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထေ
မန္တလေးတိုင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်း ၄ဝဝဝ ကျော်တွင် ကျောင်းအပ်နှံရေး ရက်သတ္တပတ် လှုပ်ရှားမှု စတင??